सफलताको असली राज सेक्स ! | Kattwal.com
काठमाडौं २ भदौ । तपाई सोचिरहनु भएको होला यो कसरी हुन्छ ? आउनुहोस आज हामी सेक्ससँग जोडिएका केही राजका बारेमा जानकारी दिन्छौं । जब तपाई सेक्स गर्नुहुन्छ तपाईको मन खुश हुन्छ । र अफिसमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ । जव अफिसमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ तब तपाईको बोस खुशी हुन्छन् र प्रमोशन गरिनदिन्छन् । यो हामीले भनेको होइन, एक अध्ययनले यस्तो भन्छ । के तपाईलाई थाहा छ सेक्स सफलताको राज ? जान्नुहोस यसबारेमा सबै कुरा :
साथै अध्ययनले यो पनि भनेको छ कि जुन व्यक्तिले दैनिक सेक्स गर्छन उनीहरुले नगर्नेको तुलनामा ४।५ प्रतिशत बढि तलब पाउँछन् । जागिरमा कयौं पटक यस्तो पनि हुन्छ कि राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ तर उसको प्रमोशन हुँदैन । यदि तपाई नियमित सेक्स गर्नुहुन्छ भने तपाईको प्रमोशन पनि छिट्टै हुन सक्छ ।